Alefaso any amin’ny mpiandraikitra ny fanamarihanao! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jolay 2019 4:34 GMT
Amporisihina ny mpikambana rehetra ao amin'ny vondrom-piarahamonina mba hanome fanamarihana, na hametraka fanontaniana any amin'ny solontenan'ny Vondrom-piarahamonina GV ao amin'ny filankevi-pitantanana, Marianne Diaz Hernández, Qurratulain Zaman ary Laura Vidal.
Azonao atao ny mifandray amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny mailaka, WhatsApp, finday, Skype na izay fomba mety aminao.
Marianne Diaz Hernández: Twitter: @mariannedh
Laura Vidal. Twitter @lenguaraz
Raha sendra te hanao fanamarihana tsy mitonona anarana, dia farito tsara araka izay vitanao. Ny fanehoan-kevitra ankapobeny tsy misy antsipirihany dia mety tsy hahazo valiny avy amin'ny solontenan'ny filankevitra, ary mety hitarika amin'ny fahatsapana fa tsy nanao na inona na inona izahay tamin'ny nandray izany.
Manantena hamaky anao!